Etu esi eme ihe maka ụkọ vitamin mmiri | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Oge opupuwo mmiri. N'ụtụtụ, ụmụ nnụnụ na-abụ abụ na mpụga na windo, mana ọ siri ike iteta, mgbe ọrụ gasị, ike adịghị ezu maka ihe ọ bụla. Ọtụtụ mgbe enwere mmetụta na echi ị nwere ike iwepu oyi.
Nwere ike ịnụ mgbe mgbe na mbọ gị ga-amalite ịgbaji, bepụ akpụkpọ ahụ gị, ntutu gị ga-apụkwa. Iwe iwe na-apụta, ọnọdụ ọjọọ, ọrịa na-adịghị ala ala na-akawanye njọ, wdg. Ihe ndị a niile dị n'elu bụ mgbaàmà nke ụkọ vitamin nke oge opupu ihe ubi.
Kedu otu esi ewusi anụ ahụ ike n'oge opupu ihe ubi?
Enweghị vitamin bụ ọnọdụ nke ahụ na-enweghị vitamin. Ọtụtụ mgbe, nke a na - emebi ihe ọgụ, nke ga - emesịa kpata ọrịa nke ọrịa na - adịghị ala ala, yana oke ike nke ọdịdị nke ọrịa nje dị iche iche.
N'ezie, iji jide n'aka na ọnọdụ a adịghị eso ọrịa ọ bụla dị ize ndụ, ọ ka mma ịme ule. Mana ndị dọkịta nyere ọnụ ọgụgụ na 85% ndị mmadụ nwere ụkọ vitamin n’oge opupu ihe ubi.
Nwere ike dozie ọnọdụ ahụ site na enyemaka nke ihe dị iche iche nke multivit Vitamin na mineral. Ma agbakwala ụlọ ahịa ọgwụ ozugbo ma mefuo nnukwu ego. Nwere ike idegharị vitamin nke anụ ahụ n’ime ahụ site n’enyemaka nke ngwaahịa ndị nwunye ọ bụla na kichin nwere.
Enweghị vitamin na oge opupu ihe ubi - ịchọ mma ga-enyere aka
Were anụ ahụ nri dị mkpa jupụta anụ ahụ, ị ​​nwere ike iji ihe ọ .ụ .ụ. N'otu oge ahụ, tii na kọfị Ọ ka mma iji dochie a rosehip ofe, mkpụrụ osisi a mịrị amị ma ọ bụ infusions nke viburnum tomato.
Ọ bara uru maka ahụ mmadụ irichapụ ihe ọ juụicesụ ọhụụ edoziworo site na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi dị iche iche. Mgbe atesịrị ya mmiri, ọ dị mkpa ị drinkụ ya maka nkeji iri na ise. Ya mere, maka mmiri ihe ọ futureụ futureụ ọ dịghị mkpa ka eme ya.
Enwere otutu vitamin na nhazi ahihia, ha ga enyere gi aka inagide odida vitamin. Ntụziaka ndị a na-enyere aka nke ọma. A na-ewere Lingonberries, akwụkwọ ndụ nettle na hips hiri nne nhata. Mgbe ahụ wụsa ngwakọta agwakọta na mmiri esi. I nwere iko iko mmiri iko iri abụọ. Ọ dị mma itinye ihe niile na thermos, ebe ọ bụ na ịchọrọ isi ọnwụ ka ọ dịkarịa ala awa anọ.
Họchaa ma .ụọ. Enwere ike ịụ 200 ml ihe ọ XNUMXụ timesụ ugboro atọ n'ụbọchị - ụkọ vitamin ga-agbada!
A na-eji iko esi mmiri na-agba tablespoon nke ahịhịa primrose na minit iri atọ. Anyị na-asacha ma na-a 70ụ XNUMX ml nke ihe ọ halfụ halfụ na ọkara otu awa tupu eri.
Kedu ihe dị mma iri nri na-enweghị vitamin?
N'oge opupu ihe ubi, a ga-akwụnye nlebara anya pụrụ iche nri. Otu n'ime ihe kachasị mkpa na-eme ka ihe ndị na-alụso ọrịa ọgụ sie ike bụ vitamin C. A na-ahụ ya n'ụdị ụdị kabeji, yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, currant, na mkpụrụ osisi citrus. Mana ọ dị mkpa icheta na n’oge ọgwụgwọ okpomọkụ a na-emebi vitamin a.
N’inweghi vitamin A, mmepe nke ahu n’emelata. A na-ahụ ọtụtụ vitamin A na karama na pumpkins. Ọ dị mkpa maka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ma dokwaa anụ ahụ nke ọma.
Ọmarịcha ihe mgbochi anụ ahụ bụ vitamin B1. Ọ bụ ya na-arụ ọrụ nke sistemụ ụjọ, metabolism.
Inye ya na ọka, mkpo, anụ, akụ. Walnuts nwere ọtụtụ vitamin na mineral.
Iji mee ka nri digestion, a ga-etinye kabeeji na nri. O nwere potassium, vitamin C na PP, yana eriri eke.
Ọtụtụ mgbe ịchọrọ ịnọ n'ikuku ọhụrụ, ma ghara ịgha ụgha n'ihu TV n'ụlọ. Mgbe adịghị ike nke oge opupu ihe ubi na ụkọ vitamin agaghị adị oke egwu.
Tupu iji decoction nke ahịhịa ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ, anyị na-akwadosi ike ịkpọ dọkịta!
Ihe na ahụ ike
Ajuju 21 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,513.